Valverde oo si weyn u amaanay Lionel Messi kadib guushii weyneed ay ka gaareen Sevilla – Gool FM
Valverde oo si weyn u amaanay Lionel Messi kadib guushii weyneed ay ka gaareen Sevilla
(Barcelona) 23 Feb 2019. Macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa si weyn kaga hadlay guushii muhiimka ahayd ay Sevilla kaga gaareen 4-2, kulankii horyaalka La Liga ay labada kooxood maanta ku wada ciyareen garoonka Ramon Sanchez.
Macalinka reer Spain ayaa ciyaarta kadib si weyn u amaanay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay kan ugu fiican aduunka.
“Qeybtii hore ee ciyaarta waxaan kubada in badan ku heysanay aaga kooxda Sevilla, balse iyagu waxay halis ku ahaayeen weerarada gaadmada ah, waxayna dhaliyeen goolka koowaad, sidaas darteed waxaan u maleynayay in wax laga beddelayo qorshaha, balse si fiican ayay sheekada ku dhamaatay”.
“Waxay ahayd inaan waxyaabo badan sameyno bilawga qeybta labaad ee ciyaarta, hadii kale waxaan la kulmi lahayn guuldaro, waxaan ku soconay si fiican, waxaana ku qasbaneyn inaan ciyaarta jabino”.
Intaas kadib Ernesto Valverde ayaa wuxuu u soo jeestay amaanta kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
“Messi waa go’aamiye adag, waa mid cajiib ah, Sevilla waxa ay heystaan ciyaartoy muhim ah sida Navas, Ben Yedder iyo Sarabia, lakiin waxaan heysanaa ciyaaryahan, waa kan ugu fiican adduunka”.
Kooxda Chelsea oo dooneysa in Man City ay ka aar gudato… (Bal Eeg Shaxda la filayo in tababare Sarri uu ku soo galo kulanka bari)
HORDHAC : Chelsea vs Man City ee fiinalaha tartanka EFL Cup , Londone oo idil oo usacaba tumeysa Bules iyo City oo doneysa in mar labaad ay hanato tartankan.